Uyenza njani iVidiyo yakho yeYouTube ukuba ibonakale iNgcali ngakumbi? -YTpals
Iividiyo zeYouTube zininzi kakhulu kwinani. I-1,300,000,000 isebenzisa iYouTube yonke imihla, kwaye okumangalisa nangakumbi kukuba iiyure ezingama-300 zevidiyo zilayishwa eqongeni yonke imizuzu. Kodwa zingaphi kwezi zigidi zevidiyo uzijongileyo ezihlala nawe? Impendulo: bambalwa kakhulu.
Njengalo naliphi na iqonga leendaba ezentlalo, i-YouTubers iphila ngee-eyeballs. Baza nento enethemba lokuba ababukeli babo baya kubajonga kwaye babakhumbule. Unokuba unethemba elifanayo, kodwa ungayiphumeza le njongo kuphela xa iividiyo ziingcali.
Ukuba unqwenela ukunyusa iinzame zakho zokuthengisa kwi-YouTube, kuya kufuneka ke ulandele ezi ngcebiso zokwenza umxholo wevidiyo yakho ube ngobungcali:
Cwangcisa umxholo wevidiyo yakho
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza ividiyo yeYouTube, nokuba nguwe okanye ngokuqesha iarhente yevidiyo eyiyo, kufuneka ucwangcise. Ukucwangciswa okufanelekileyo ngokungathandabuzekiyo kubambe isitshixo sempumelelo kwiqonga levidiyo. Kuya kufuneka uqale ucwangcise injongo yakho ngokuzibuza umbuzo omnye olula: Ndifuna ukufezekisa ntoni ngale vidiyo?
Isinyathelo esilandelayo kwinkqubo yokucwangcisa kukuchonga abaphulaphuli ekujoliswe kubo ngokufanelekileyo kwividiyo yakho. Baninzi abasebenzisi beYouTube phaya, kodwa ngaba ividiyo yakho iya kuba nengqondo kuye wonke umntu? Mhlawumbi hayi. Yonke into malunga nevidiyo yakho-ukusuka kwiskripthi ukuya kufoto ukuya kuhlelo-iya kuxhomekeka kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Soloko uqinisekisa ukuba unegunya kumandla amakhulu kwiimvakalelo zabantu. Emva kwayo yonke loo nto, iimvakalelo zezona ziqhubela abantu ukuba bathathe inyathelo.
Gcina imvelaphi yevidiyo yakho icocekile
Xa kuziwa kwimvelaphi yevidiyo yakho, kufuneka ulumke ngakumbi. Uhlobo lwemvelaphi oyikhethayo luya kuxhomekeka ikakhulu kuhlobo lomxholo wevidiyo owenzayo, iinjongo zakho zokuthengisa, kwaye ngokuqinisekileyo, ngabaphulaphuli bakho ojolise kubo. Ungaya kwimvelaphi yokwenyani (enje ngezicwangciso zobomi bokwenyani njengendlu, iofisi, okanye indawo engaphandle) okanye imvelaphi engeyiyo (ebandakanya izikrini, amaphepha kunye namakhethini).
Imvelaphi yevidiyo yakho akufuneki iphume emgceni kuhlobo lwevidiyo oyenzayo. Kuya kuba nakho ukubalisa ibali lakho, ukuthumela umyalezo ojolise kuwo, kwaye ukongeza ixabiso kwi-brand yakho. Ngapha koko, imvelaphi yakho iya kuba nefuthe kumgangatho wevidiyo yakho. Ke qiniseka ukuba uyikhetha ngononophelo.
Fumana ukukhanya ngokufanelekileyo
Emva kokuba ukhethe imvelaphi elungileyo, into elandelayo ekufuneka uyiqwalasele kukukhanya. Ukukhanyiswa kwevidiyo yakho kunefuthe elibonakalayo kumgangatho. Ukungabikho kwesibane esifanelekileyo kunokubangela ukuba ividiyo yakho ibonakale ingenabungcali kwaye ingacacanga, oko kuthetha ukuba abaphulaphuli bakho banokulahleka ifuthe lokwenyani.
Ukukhanya kwendalo, njengokukhanya kwelanga, kuthathwa njengowona mthombo wokukhanya kwindalo yevidiyo. Ukuba usebenzisa lo mthombo, qiniseka ukuba uyayishutha ividiyo yakho xa ukukhanya kuthambile. Ekuseni okanye ngokuhlwa lelona xesha lilungileyo lokwenjenjalo. Ukuba udubula ividiyo ngaphakathi, kuya kufuneka utyale imali kwizibane ezithile ukuze ufumane ifuthe elifanelekileyo. Sebenzisa izithunzi kwibhalansi elungileyo ukwenza inkangeleko entle.
Umgaqo wakho wokubumba kufuneka ube yi-3 × 3
Okokugqibela, kodwa ngokuqinisekileyo akukho kuncinci, kuya kufuneka uyazi imigaqo yokwakheka yokwenza isiphumo esifanelekileyo ngomxholo wevidiyo yakho. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ulandele umthetho wesithathu. Oku kwahlulahlula isakhelo sakho kwigridi elula eyi-3 × 3 kwaye kudala iindlela ezinqamlezileyo ezibeka isifundo sakho ngendlela efanelekileyo. Amanqaku endibano apho kufaneleke ukuba ugxile ngamandla.
Kunqande ukubeka umxholo wakho embindini wesakhelo, ngakumbi ukuba ungumqali wevidiyo we-novice. Ukwenza njalo kudala iindawo ezingenanto, ezingasetyenziswanga kwinxalenye yesithathu ephezulu yesakhelo. Kwakhona, ukuba ubeka isifundo sakho ngokuthe nkqo embindini, qiniseka ukuba ulungelelanisa amehlo esifundo sakho kunye nomgca ophezulu wegridi. Uya kufumana ukuxhoma lo mgaqo wokubumba njengoko ufumana amava amaninzi.
Landela ezi ngcebiso ukwenza iividiyo zeYouTube ezijongeka njengobungcali kwaye uthathe iinzame zakho zokuthengisa ividiyo njengenotshi ephezulu.
Uyenza njani iVidiyo yakho yeYouTube ukuba ibonakale iNgcali ngakumbi? ngababhali beYTpals, 30 Julayi 2021
Iingcebiso ezi-5 zokulandela ukuba ufuna iividiyo zakho zikaYouTube zivele kuPhendlo lukaGoogle
I-userbase yeYouTube ephethwe nguGoogle kulindeleke ukuba ibethe izigidi ezingama-210 ngo-2022. Uninzi lwayo kungenxa yolonwabo olukhulu kunye namandla okuthengisa kwiividiyo zikaYouTube. IYouTube ikwayeyesibini eyona nethiwekhi idumileyo yentlalontle…
Njani ukuba iShishini liwafumane amaXwebhu kwiNtengiso yeYouTube
Umhlaba wentengiso yeYouTube yinto eqhubekayo. Iifomathi zevidiyo, iintsingiselo, kunye nemiceli mngeni itshintsha ngokukhawuleza njengamaxesha onyaka, kwaye ngoku kubaluleke ngakumbi kunanini na ngaphambili ukuba iimveliso kunye nabenzi bemxholo…
Ungazifumana njani iividiyo zakho kwiYouTube?
I-YouTube sisixhobo esinamandla sentengiso esifunwa lishishini ngalinye. Liqonga elilungele ukuthengisa ishishini. Amashishini amaninzi aneakhawunti yeYouTube apho kuthunyelwa iividiyo, kodwa ukuthengisa ividiyo ku…